Public Kura | » ऐनाको आविष्कार कहिले भयो ? ऐना हेर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन् ? ऐनाको आविष्कार कहिले भयो ? ऐना हेर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन् ? – Public Kura
ऐनाको आविष्कार कहिले भयो ? ऐना हेर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन् ?
ऐना नहुँदो हो त के हुन्थ्यो होला ! कहिल्यै सोँच्नुभएको छ ? वास्तवमा ऐना सानो चिज भैकन पनि मानव जिवनको अभिन्न हिस्सा भैसकेको छ । हामी कस्तो देखिन्छौँ ? कस्तो देखिन चाहन्छौँ ?